Vokatry ny ASIC poti avy Samsung - Blockchain News
Janoary 31, 2018 Admin
Vokatry ny ASIC poti avy Samsung
Nanomboka namokatra Samsung ASIC poti ny harena ankibon'ny tany ny cryptocurrency
Ny tena mpifaninana ny orinasa ao amin'ity tsena mahazo ny harena ankibon'ny tany fitaovana ho amin'ny $ 400 tapitrisa ao amin'ny lafiny.
Korea Atsimo Samsung no anjara amin'ny famokarana ASIC poti, izay ampiasaina ho an'ny famokarana BitCoins, ethers sy ny cryptocurrencies. Izany no nosoratan'i TechCrunch izy ny amin'ny solontenan'ny ny orinasa.
Samsung izao orinasa mpamokatra entana be atao poti for thecryptocurrency. Na izany aza, we can not give more details about our customers. – Samsung PressOffice
Ny voalohany dia ny momba ny asan'ny Samsung nandritra ny poti ho an'ny mpitrandraka dia nitatitra ny haino aman-jery Koreana. Araka ny fanontana ny eo an-toerana The Bell, ny famokarana ASIC faobe poti ao amin'ny Samsung Semiconductor fototra nanomboka tamin'ny volana Janoary 2018. Sources milaza fa ny orinasa efa nanaiky ny famatsiana fitaovana ny harena ankibon'ny tany ho an'ny orinasa iray avy any Chine tsy voalaza anarana.
Ny solontenan'ny Samsung tsy nety hiresaka amin'ny TechCrunch ny antsipirian'ny asa teo amin'ny poti-ASIC.
Ny boky dia manamarika fa Samsung tsy maintsy hifaninana amin'ny Taiwanais microchip mpanamboatra TSMC, izay mahazo ny fitaovana avy amin'ny harena ankibon'ny tany $ 350 tapitrisa ny $ 400 tapitrisa ho an'ny lafiny. Ny orinasa lehibe toy izany mpamatsy manompo ny harena ankibon'ny tany sy ny fitaovana toy ny Bitmain Kanana Creative.
Taorian'ny ny vokatry ny 2017, Samsung lasa lehibe indrindra mpanamboatra Chip, fifindra avy ny toerana misy ny mpitarika ny Intel. Samsung ny raharaha any amin'ny microchip famokarana in 2017 dia $ 69 lavitrisa raha oharina amin'ny Intel ny $ 62.8 lavitrisa.
Ao amin'ny firenena mandroso indrindra, a...
Previous Post:Ahoana no hitarika ny ICO tany Soisa
Next Post:MasterCard ny CFO: Cryptocurrency boosting fividianana ireo mpanjifa ny fandaniana